Ụgbọ elu ọhụrụ si Antigua gaa Barbados na Providenciales na interCaribbean Airways ugbu a
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Airlines » Ụgbọ elu ọhụrụ si Antigua gaa Barbados na Providenciales na interCaribbean Airways ugbu a
Airlines • Airport • Akụkọ Antigua & Barbuda • Aviation • Akụkọ ọhụrụ Barbados • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Caribbean • News • ndị mmadụ • Iwughachi • Ịrụ ọrụ • Tourism • Transportation • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem
A na-ahazi ụgbọ elu ịmalite ọrụ site n'izu nke Disemba 17, 2021 n'oge ezumike ma mee ka Antigua jikọọ na mpaghara ahụ karịa ka ọ dịbu.
InterCaribbean Airways anọwo na-eje ozi Antigua site na Tortola kemgbe 2015 nwere ụgbọ elu abụọ kwa ụbọchị na ọpụpụ AM na PM, na-ejikọ ụgbọ elu Europe na USA/Canada yana njikọ Antigua na ụgbọ elu na-aga n'ihu na obodo 8 ndị ọzọ na-aga n'ihu.
ugbu a, Cgbọ elu AirCaribbean nwere obi ụtọ ịkpọsa ọrụ Antigua ọhụrụ nwere ebe ọhụrụ abụọ na-adịghị akwụsị akwụsị Jet (ERJ145), na-ejikọta Antigua (ANU) na Barbados (BGI) nwere ụgbọ elu mbụ abụọ kwa izu, yana ọrụ anaghị akwụsị akwụsị site na Antigua (ANU) gaa Providenciales (PLS).
The Barbados Ụgbọ elu na-aga n'ihu ozugbo gaa Georgetown (GEO), Guyana nke nwere awa 2 nke ofufe na obere oge njem. Otu ebe njikọ dị na Barbados na-enyekwa St Vincent na Grenadines (SVD), St Lucia (SLU) na Grenada (GND).
Maka oge mbụ Eastern Caribbean nwere ike nweta ọrụ ụgbọ elu n'etiti Antigua na Barbados, na gaba na Georgetown, na-eme nke a njikọ ụgbọ elu ngwa ngwa na mpaghara.
Ọrụ ọhụrụ anaghị akwụsị akwụsị nye Providenciales (PLS), Turks na Caicos Islands, na-enye njikọ gawa ozugbo na Havana (HAV), Cuba yana Nassau (NAS), Bahamas, na Kingston (KIN), Jamaica. Ndị njem nwere ike ugbu a jet n'etiti Antigua na Havana n'ihe na-erughị awa 4 nke oge ụgbọ elu na-enye njikọ kacha ngwa ngwa ahịa ahụla.
Usoro ihe omume Antigua- Barbados-Antigua
Flight JY 797 na-apụ Antigua 2.30 mgbede rutere Barbados 3.35 ehihie (Wednesde na Satọde)
Flight JY 792 ga-apụ Barbados 12.10 mgbede, rute Antigua 1.15 elekere.
Flight JY 794 na-apụ Antigua 1.45pm rutere Providenciales 2.45pm* (Wednesde na Satọde)
Flight JY 795 ga-apụ Providenciales n'elekere 10.30 nke ụtụtụ, rute Antigua 1.30 * ehihie
* Ọdịiche oge awa 1 n'oge oyi n'etiti Antigua na Providenciales